ဧရာဝတီ၏ကယ်တင်ရှင် (ပြည့်သူသမ္မတ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဧရာဝတီ၏ကယ်တင်ရှင် (ပြည့်သူသမ္မတ)
Posted by ရွှေတိုက်စိုး on Oct 1, 2011 in Copy/Paste | 16 comments
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ကြီး ရပ်နားထားလိုက်ပြီးဆိုတဲ့ သတင်းကို ကြားလိုက်တော့ ၀မ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်ဗျာ..
ဧရာဝတီကို ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ သမ္မတကြီးကိုလဲ လေးစားဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ… ဧရာဝတီအတွက် အဘက်ဘက်က ကာကွယ်ဖို.ကြိုးပမ်းပေးခဲ့ကြသော အခြားခြားသော လူများကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
အရင်တုန်းက ဘာတွေပဲလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့ ကောင်းတာလုပ်ရင် လုပ်သလို အားပေးဂုဏ်ပြုရမှာပါပဲ..
အဲဒီအတွက် ဘာကောင်မှမဟုတ်တဲ့ ကျွန်တော်က ဧရာဝတီ၏ ကယ်တင်ရှင် သမ္မတကြီးအတွက်၊ဧရာဝတီအတွက် လက်ခုပ်တီးပြီး ဂုဏ်ပြုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျားးးး.. ဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်း………………
သမ္မတကြီး လဲ ပြည်သူတွေရဲ. သဘောထားနဲ. ကိုက်ညီအဆင်ပြေတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေများများချနိုင်ပြီး သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေ……………
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဦးသိန်းစိန်ကိုလည်း ဒီအချက်မှာ အမှတ်ပြည့်ပေးပါတယ်….
အမေ ဧရာကိုကျနော်တို့အားလုံးချစ်တတ်လာအောင် သင်
ကြားပေးလိုက်တဲ့ “တစုံတရာ” ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲကြီးတစ်နှစ်ပြည့်ရန် တစ်လနဲ့ ၇ ရက်အလိုမှာ သမ္မတကြီးက ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကို လေးစားသမှုပြုလိုက်ပါပြီ ။ ထာဝရကျေးဇူးတင်လျက်ပါ ။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရ ပြည်သူတွေအတွက် လက်တွဲမှုရောင်နီသမ်းလာပြီလို့ထင်မြင်မိပါတယ် ။ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းဆိုင်းငံ့မယ့်ကိစ္စအတွက် သမ္မတကြီးအတော်ကြီးကို အတိုက်အခံလုပ်လိုက်ရမယ်နဲ့တူပါတယ် ။ သမ္မတကြီး ကျန်းမာပါစေ ။ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးရဲ့ရင်ခွင်ရိပ်မှာ တိုင်းသူပြည်သားတွေနည်းတူ ပျော်ရွှင်မှုရပါစေ ။
ဒီလိုမှ မလုပ်ရင် ဇော်မင်း ရေစုန်မျောရမှာ .. သူပြောခဲ့တဲ့စကားကို သူ ပြန် ရုတ်သိမ်းဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ အခြေအနေမှာ ဒီလို ၀င်ပေးရတယ်လေ .. ဒါပေမယ့် သူ ကြေညာသွားတာ မြစ်ဆုံဆည်ကိုပါ ..
အထက်ဖက်မှာ ရှိတဲ့ (၇) ခု က ဆက်ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် .. အထူးသဖြင့် အပေါ်ဆုံးရောက်နေတဲ့ ဆည်
နောက်ပြီး နားမယ် ဆိုတာ နောက်ထပ် ၄နှစ်ခွဲ .. နောက်တက်လာမယ့် အစိုးရက ဆက်လုပ်နိုင်အောင် ကြံစည်သွားနိုင်တယ်
အခုတောင် ကျောက်ဖြူ သင်္ဘောဆိပ် က နေ မူဆယ်အထိ ရပ်နားမယ့် ဘူတာ မရှိတဲ့ အမြန်ရထားလမ်း ရယ် .. သဘာဝဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းရယ် .. အဲဒါတွေကို စောင့်ရှောက်ဖို့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ၀င်လာမယ့် တရုတ်စစ်သည် .. လုပ်သား .. အထက်ဖက်က ဆည်အတွက် ၀င်လာဦးမယ့် လုပ်သား .. ဒါတွေအတွက် တိုင်းပြည်က ပေးဆပ်လိုက်ရမှာ ဘယ်လောက်များမလဲ ဘယ်သူသိနိုင်မှာလဲ
အမျိုးသမီးများ အခုကတည်းက သတိထားကြဖို့ လိုမယ်ထင်တယ်
migrant worker ဆိုတာကို ခဏခဏ ပြောခဲ့ကြပြီး အခုတော့ သူတို့တတွေ migrant worker အနေနဲ့ လာပြီဆိုရင် HIV တွေလဲ ပါလာမှာ စိုးကြောက်မိပါတယ်
step by step ပေါ့၊ ကမ္ဘာ့ဒီမိုကရေစီရေစီးကြောင်းကို မည်သည့်နိုင်ငံ၊ မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မှမလွန်ဆန်နိုင်ပါ။
ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးခြင်းသည်အာဏာပိုင်များကို မှန်ကြေးမှုံကြည့်ခိုင်းခြင်းနှင့်တူ၏၊ ထို့ကြောင့်သူများ၏မဲနဲ့ ကိုလ့်ရှေ့ရေးကိုအဆုံးအဖြတ်မခံဘဲ၊ ကိုလ့်ရှေ့ရေးကိုကိုလ့်မဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ရ၏ ။နောက်တကြိမ်မလွှတ်တန်းပေါ့။
လောလောဆယ် အခြားရလာဒ်ကောင်း အသေးစားလေးတွေလဲတွေ့ရလို့
အစိုးရကို ဝေဖန်ပြောဆို အတိုက်အခံလုပ်တာလေးတွေ ထိန်းထားရမယ်ဆိုတာလဲ နားလည်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီလောက်နဲ့တော့ ယုံလိုက်ဘို့ လိုပါသေးတယ်။
စည်းရုံးမှုရှိရင်၊ဒေါ်စုရဲ့ power နဲ့ဆိုအကြွင်းမဲ့ရုံကြည်ပါတယ်။
နင့်သမတဂျီးကို ချစ်လွန်းလို့ ဒီပို့စ်ကို thumb down ပေးတယ်ကွာ။ သောက်ကျိုးနဲ တော်လိုက်တဲ့ သမတဂျီး။ တရုပ်နဲ့စာချုပ်ခဲ့တဲ့တပ်ရှုပ်ကြီးကို အံတုပြီး ပြည်သူ့ဆန္ဒကို လိုက်နာတယ်ပေါ့လေ ဒီလိုလား.. ချားစီးပြောတောင် မယုံဘူးဟေ့။
ကျနော် ငချွတ်လေး အမြင်ကတော့ သိပ်မကြာတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်
အဖြေပေါ်လာမှာပါ စောင့်ကြည့်နေပေးရမယ် နဲ့တူပါတယ်။
သမ္မတကြီး သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေဗျာ။ပုပုကွကွ ကျပ်မပြည့်သူများ ငရဲလားပါစေဗျာ။
ကြည့်လဲလုပ်ကြပါနော့…။ တော် တော်ကြာ…”ကျန်းမရေးအခြေအနေအရနှုတ်ထွက်ရန်တင်ပြလာသည်အတွက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ လက်ခံလိုက်ပါသည်”…….ဆိုပြီး။
ဘွာတေ – မဖြစ်နိုင်ကြောင်းပါ။ ယုံပါ…။
(ကိုကြောင်ကြီးရယ်..စိတ်တွေ နဲနဲလျှောပါအုံး…။ သမ္မတ သိန်းစိန်အတွက် မဟာစွန့်စားမှုခြေလှမ်းကြဲကြီးပါ။)
သမ္မတကြီး ရဲ့ 
ကောင်းမွန်သော နှလုံးသား အတွက်